भ्रष्टा, चारको अ’भियोग लागेका ट्रा, फिक प्रहरी हाकिमको घरमा सुनको ट्वा, इलेट ! – Kavrepati
Home / रोचक / भ्रष्टा, चारको अ’भियोग लागेका ट्रा, फिक प्रहरी हाकिमको घरमा सुनको ट्वा, इलेट !
admin October 2, 2021	रोचक Leaveacomment 101 Views
एजेन्सी। हालै रुसका एक वरिष्ठ ट्राफिक प्रहरी अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सरकारी अधिकारीहरु प्रहरीसहित उनको घर छा’पा मा’र्न गएका थिए। प्रहरी कर्णेल अलेक्सी साफोनोभसहित ६ प्रहरीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो।
Previous सडकमा गु’ ड्दै गरेको ट्रक बाईकतिर प’ ल्टियो, यसरी क्यामरमा रेकर्ड भयो-हेर्नुहोस् ला, ईभ भिडियो
Next चीनबाट लस्कर लाग्दै नेपाल भित्रिए सय वटा विद्युतीय कार